China C miendrika vovoka mifono vy miorina amin'ny harato fefy ho an'ny mpanamboatra zavamaniry ary mpamatsy | Pro Fefy
C-miendrika vovoka mifono vy miharo harato ho an'ny zavamaniry mahery
Ny fefy tariby vita amin'ny tariby miendrika C dia mpivarotra mafana hafa any Japon ho an'ny fampiasana trano na zavamaniry amin'ny masoandro. Izy io dia antsoina koa hoe fefy tariby tariby, fefy vy nandrisika, fefy fiarovana, fefy masoandro. Ary mahazatra ny fefy tariby mihombo 3D Curved amin'ny rafitra fa tsy mitovy amin'ny endrika miondrika eo an-tampon'ny sy ambany amin'ny fefy.
Ny fizotry ny famokarana miendrika C vy fefy tariby fefy dia mitovy amin'ny fefy vy hafa. Izy io dia fefy vy mampiasa tariby mitafo vy niraikitra voalohany ary avy eo mila milina miondrika mba hanao C miendrika ambony. Izy io dia fefy matevina avo lenta sy maharitra ary ampiasaina amin'ny alàlan'ny sakana avo lenta.
PRO.Fence dia manome fefy miendrika tariby miendrika C miorina amin'ny tontonana vita amin'ny savaivony ary vita amin'ny vovoka feno mifono. Izany dia hanatsara ny fanoherana ny harafesina ary hanitatra ny vanim-potoana fampiasana. Manome fittings habe kely izahay fa tsy iray lehibe hitsimbinana ny vidin'ny mpanjifa ary raha azo antoka ny fampiasana tsy tapaka. Io ihany koa no safidin'ny mpanjifa maro an'isa ao Japon ary be mpampiasa amin'ny rafitra fencing an'ny zavamaniry masoandro, tranobe honenana, vondrom-piarahamonina, zaridaina, làlana sns.
Azonao atao ny mahita azy mora foana manodidina ny trano fonenana, ny vondrom-piarahamonina, ny valan-javaboary any Japon ary matetika koa no ampiasaina amin'ny fefy perimeter an'ny zavamaniry masoandro.
Paositra: φ48 × 2.0mm
Vita: vovoka mifono (Brown, Mainty, fotsy)
Ity fefy vy tariby ity dia vita amin'ny tariby vy ary azo ampanjifaina amin'ny haavony samihafa, ny fandrefesana samy hafa mba hanomezana fahafaham-po ny filàna eo an-toerana sy ny tetibolan'ny tetikasa.
Ny velaran'ny fefy vita amin'ny vovoka electrostatic nopetahany takelaka sy PRO.Fencing mampiasa marika malaza Akson fa ny fonosana vovoka dia hahatratra 150μm farafaharatsiny. Fanampin'izany, ny fampitaovana mifanentana rehetra dia fitaovana SUS304. Ireo dia manana andraikitra lehibe amin'ny fanoherana ny harafesina. Ny PRO.Fence dia miantoka ny tsy hisian'ny rusting farafaharatsiny mandritra ny 6 taona.
3) azo ovaina
Ny endrika boribory antsasaky ny faribolana eo amin'ny farany ambony sy eo ambanin'ny tontonana harato mba hanoherana ny hatairana avy any ivelany ary hahatonga ny fefy ho tsara tarehy ihany.
Item NO .: PRO-12 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: China Wholesale Wire Container Factory - Vatan-kazo vy fiarovana vy lozika mihodina harato - Pro
Manaraka: Fefy vy tariby miendrika L ho an'ny tranobe maritrano
M-miendrika Galvanized Welded Mesh Fefy Ho an'ny Solar ...
Fehin-kambana boribory mifono vy mifono harato fefy ho an'ny ...
M-fefy nandrisika nandrisika vy harato (One-Piece ...